Topy Maso Eran-tany | Mifohaza! Aprily 2013
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Pangasinan Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Xhosa Zoloa Éwé
Nihena be ny vonoan’olona sy ny heloka bevava ary ny fandrobana tao New York, tamin’ny herinandron’ny 29 Oktobra 2012, raha mitaha amin’ny herinandro mifanitsy amin’io tamin’ny 2011. Nandrava ny morontsiraka atsinanan’i Etazonia mantsy ny rivo-doza Sandy, ka tapaka ny jiro tany amin’ny toerana maro. Hoy i Paul Browne, mpitondra tenin’ny polisy ao New York: “Mihena be ny heloka bevava, aorian’ny rivo-doza na fahavoazana lehibe toy [ilay fampihorohoroana tamin’ny 11 Septambra 2001].” Mitombo kosa ny halatra, satria be ny manararaotra maka ny fananan’ny hafa. Tsy nahagaga an’i Browne izany. Hoy izy: “Betsaka ny toerana tsy misy jiro.”
Manahy ny mpahay siansa satria mitady hanimba ny tontolo iainana any, ny zavamaniry avy any an-toeran-kafa. Misy mpitsidika an’aliny any isan-taona, ary mitondra voan-javamaniry sivy eo ho eo ny olona tsirairay. Manaraka ny baotiny na ny kitapony izy ireny. Ahitana zavamaniry maro tsy fahita any mihitsy izao eo amin’ilay saikinosy eo andrefana.
Ramatoa 83 taona no olona voalohany nametahana solona valanorano. Namboarina tamin’ny milina mandeha amin’ny lazera izy io. Vovoka titane no natsonika, ary avy eo nakambana tsikelikely mandra-pahavitan’ilay valanorano. Nisy fandidiana natao avy eo nametahana an’ilay izy tamin’ilay ramatoa. Aretin-taolana no nahasimba ny valanoranony. Efa afaka misakafo sy miaina ary miresaka tsara izy izao.
Voarara ny fifohana sigara tamin’ny toerana sasany faleham-bahoaka any Alemaina, nandritra ny herintaona. Nisy olona nanaovana fanadihadiana, ka hita hoe nihena 13,3 isan-jato ny olona niditra hopitaly noho ny fanaintainana ao amin’ny tratra, ary nihena 8,6 isan-jato ny voan’ny aretim-po.
Topy Maso Eran-tany—Aprily 2013
Soratra Fandikana boky MIFOHAZA! Afaka Miova ve ny Olona Mpamono Vady?
Hizara Hizara MIFOHAZA! Afaka Miova ve ny Olona Mpamono Vady?
Afaka Miova ve ny Olona Mpamono Vady?
MIFOHAZA! Afaka Miova ve ny Olona Mpamono Vady?